Organic ingredients | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Organic ingredients
Ny fomba famokarana raozy amin'ny lohataona, fahavaratra ary fararano - dia manambara tsiambaratelo izahay
Ny raozy dia noheverina ho mpanjakavavin'ny voninkazo foana, toa izany, noho izany dia tena manilikilika izy. Ny voninkazo dia mitaky fikarakarana sy fikarakarana mandritra ny vanim-potoana. Indrindra fa ny raozy mila mangarangarana, izay tsy ahafahany mihintsana sy mitsahatra ny maniry. Ny tsiranoka mineraly amin'ny raozy Ankehitriny, any amin'ny fivarotana voninkazo dia misy tsiranoka be dia be azo avy amin'ny mineraly amin'ny famokarana raozy: amin'ny endriky ny ranon-javatra, amin'ny granules, ny powders.
Manana tavoahangy mainty toy ny mamahana ilay laisoa hanamboarana lohan-dahy
Ny koba dia fihinana mahazatra, nefa tena mangatsiaka be. Mba hahazoana antoka ny fanatsarana ny loha lehibe sy goavam-be, dia zava-dehibe ny mandray andraikitra tompon'andraikitra amin'ny fimamoana sy ny fambolena ny zavamaniry. Fitsipika fototra amin'ny famokarana karaoty fotsy Ity kolontsaina ity dia tia ny tany marefo sy tsara fitondran-tena.
Azo atao ve ny mamboly ny zaridaina amin'ny gazoala
Azonao atao ny mandray anjara eto amin'ny Wikipedia amin'ny alàlan'ny fanitarana azy. Mampalahelo fa manomboka miala amin'ny tany hatrany amin'ny rivotra izy io, noho izany dia zava-dehibe ho an'ny mpamboly ny manonitra tsy tapaka ny tsy fahampian'ny azota any an-tokontany ho an'ny vokatra tsara. Ireo zavamaniry ara-boajanahary toy ny guano, dite, compost dia mety ho lasa loharano azota, fa ny fividianana azy ireo dia mitaky fandaniana.
Misafidy ny zezika lohataona ho an'ny zaridaina
Amin'ny lohataona, rehefa mifoha ny natiora dia lasa mavitrika kokoa ny mponina amin'ny fahavaratra, satria ho azy ireo no fotoana mafana. Mba hahazoana vokatra be dia be ao amin'ny fahalavoana dia tokony hanomana ny tany ho an'ny fandriana ianao amin'ny fiandohan'ny lohataona, anisan'izany ny fanangonana ireo tsiranoka marina sy ny fandinihana ireo doses tsara. Zava-dehibe ny handinihina ny filan'ny zana-pambolena izay hapetraka ao amin'ilay tranokala.
Compost dia diloilo ara-boajanahary izay azo avy amin'ny fingonoana singa samihafa (zavamaniry, sakafo, tany, ravina, rantsana, dongona). Afaka mividy komposta any amin'ny fivarotana manokana, ary afaka manao izany ianao. Ny fikarakarana komposta ao anaty kitapo fako dia fomba iray ihany.
Ahoana ny fomba hanamboarana elixir ho an'ny zavamaniry, fanatsarana ny fitsaboana
Vao haingana, ny mpamboly sy ny mpamboly dia mieritreritra momba ny fambolena organika. Na izany aza, amin'ny toe-piainana misy eo amin'ny tontolo iainana, dia tsy hisy vokatra tsara hijinja vokatra raha tsy manatsatso ny tany sy ny fambolena. Saingy misy ny làlana iray - ireo dia ny elixirs sy ny tsiranoka amin'ny fiterahana izay azo atao amin'ny tananao manokana avy amin'ny fitaovana voajanahary atsy an-tànana.
"Vazo maina": inona ny fampiasana, fomba mahandro sy ny fomba fampiharana
Ny fambolena zaridaina na zaridaina legioma dia tsy mora araka izay mety ho toa vao jerena. Ho an'ny tombontsoa avo lenta, zava-dehibe ny mandinika ny fomba fikarakarana ny fambolena: manosotra, manondrahana, mamelona. Andeha isika hiresaka momba ny zezika, izany hoe angom-bary maitso, ato amin'ity lahatsoratra ity. Inona no atao hoe zozoro Grass dia zavamaniry tsy ampiasaina amin'ny fampiasana ara-kolontsaina, avela hivoatra izy ireo, avy eo mamono ary ampiasaina amin'ny fikarakarana sarobidy zaridaina zaridaina sy zaridaina.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Organic ingredients